Tatitry ny ONU: Fanitsakitsahana ny Zon’olombelona any Érythrée
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Tiorka Tseky
Natsangana tamin’ny Jona 2014 ny Vaomieran’ny Firenena Mikambana Manadihady Momba ny Zon’olombelona any Érythrée. * Tena manitsakitsaka ny zon’ny mponina mantsy ny fanjakana any sady tsy manome azy ireo fahafahana. Nomena herintaona ilay vaomiera mba hanadihady momba izany, ary hanao tatitra am-bava eo anatrehan’ny Fivoriamben’ny ONU, amin’ny faran’ny Oktobra.
Hita tamin’ilay fanadihadiana fa “efa voalamina mialoha sady miely be ny fanitsakitsahana zon’olombelona” any Érythrée. “Tena mampijaly” koa ilay izy. Tamin’ny 23 Jona 2015 ilay vaomiera no nilaza ny vokatry ny fikarohany sy ny soso-keviny, teo anatrehan’ny Filan-kevitra Momba ny Zon’olombelona ao Amin’ny Firenena Mikambana, any Genève. Amin’ny 29 Oktobra 2015 kosa izy io no hanao an’ilay tatitra am-bava eo anatrehan’ny Komity Fahatelon’ny Fivoriamben’ny ONU, any New York. *
Fanenjehana ny Vavolombelon’i Jehovah
Nanoratra tatitra 484 pejy koa ilay vaomiera, mba hanazavana amin’ny an-tsipiriany ny vokatry ny fanadihadiana nataony. Nasongadiny tao ny fanavakavahana sy fampijaliana ny Vavolombelon’i Jehovah any Érythrée. Nanenjika azy ireo ny fanjakana nanomboka tamin’ny 1993, rehefa lasa nahaleo tena i Érythrée. Tsy manao politika mantsy izy ireo sady tsy manao raharaha miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Migadra ela be izy ireo ary ampijalijalina be. Tsy avelan’ny fanjakana hizaka ny zom-pireneny koa ireo Vavolombelona ary alainy ny kara-panondrony. Esoriny tsy ho mpiasam-panjakana izy ireo, ary foanany ny fahazoan’izy ireo alalana hivarotra. Tsy omen’ny fanjakana fanampiana sady tsy karakarainy koa izy ireo.
“Mahazo tapakila fakana sakafo ny mponina rehetra eto Érythrée, afa-tsy izahay Vavolombelon’i Jehovah. Tsy manana kara-panondro mantsy izahay. Hoatran’ny hoe tsy olom-pirenena izahay.”—Tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah iray.
Maro ny soso-kevitra naroson’ilay vaomiera sy nasainy narahin’ny fanjakan’i Érythrée. Anisan’izany ireto:
“Mandray fepetra avy hatrany mba hampitsaharana ny fanenjehana ny fivavahana rehetra, indrindra ny antokom-pivavahana sasany toy ny Vavolombelon’i Jehovah. ... Tokony haverina amin’izy ireo avy hatrany koa ny zom-pireneny sy ny zony hafa.”
“Hatsahatra ny fanerena olona hiala amin’ny taniny, satria fotsiny hoe tsy ekena ho ara-dalàna ny fivavahany ka tiana hosazina izy. Anisan’izany ny Vavolombelon’i Jehovah sy ireo tsy nety nandray anjara tamin’ilay ady.” *
Nolanin’ny Filan-kevitra Momba ny Zon’olombelona ilay fanapahan-kevitra
Taorian’ilay tatitra tany Genève nataon’ny Vaomieran’ny Firenena Mikambana Manadihady Momba ny Zon’olombelona any Érythrée, dia nisy fanapahan-kevitra iray nolanin’ny Filan-kevitra Momba ny Zon’olombelona, tamin’ny 30 Jona 2015. Nilaza io filan-kevitra io fa “tena meloka ny Fanjakan’i Érythrée satria nanitsakitsaka ny zon’olombelona ary mbola manao an’izany.” “Efa voalamina mialoha sady miely be” ny zavatra ataony amin’izany, ary “tena mampijaly.” * Nilaza koa ilay filan-kevitra fa tokony “hanao zavatra avy hatrany” ny fanjakan’i Érythrée “mba hanarahana ny soso-kevitra” nomen’ilay vaomiera, anisan’izany ireo soso-kevitra momba ny Vavolombelon’i Jehovah. Mbola nasainy nanao an’ireto koa ny fanjakan’i Érythrée:
“Tokony hatsahatra ny fanagadrana tsy amin’antony an’ireo olom-pirenena, ary ny habibiana na ny karazana sazy hafa mampijalijaly sy manambany.”
“Tokony havela hampakatra fitsarana ny olona rehetra tsy an-kanavaka, raha voasambotra. Tokony ho maimaim-poana ny fikarakarana raharaham-pitsarana, ary tokony hahaleo tena ny fitsarana. Mila hatsaraina koa ny fomba itondrana ny voafonja.”
“Tokony hohajaina ny zon’ny rehetra hilaza ny heviny sy hijoro amin’izany ary hanaraka ny feon’ny fieritreretany. Tokony hohajaina koa ny zon’ny tsirairay hanana ny fivavahany sy hino izay tiany hinoana ary ny zony hivory amim-pilaminana sy hifanerasera amin’ny hafa.”
Hihatsara ve ny fomba itondrana ny Vavolombelon’i Jehovah?
Vavolombelon’i Jehovah 54 izao no migadra any Érythrée. Nigadra nandritra ny 21 taona mahery ny telo amin’izy ireo. Tsy nisy zavatra niampangana azy ireo anefa sady tsy nandalo fitsarana akory izy ireo. Atao ao anaty kaontenera vy ny sasany. Misy indray apetraka ao anaty trano fanitso, ary any ambanin’ny tany ny antsasak’ilay trano. Mafy be ny fiainan’izy ireo ary mbola matin’ny hafanana koa izy ireo. Fantatry ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany ny fahorian’ny mpiara-mivavaka aminy any Érythrée, ary manantena izy ireo fa tsy hanenjika an’ireo namany ireo intsony ny fanjakana.
^ feh. 2 Natsangan’ny Filan-kevitra Momba ny Zon’olombelona ao Amin’ny Firenena Mikambana tamin’ny 27 Jona 2014 ny Vaomiera Manadihady Momba ny Zon’olombelona any Érythrée, taorian’ilay Fanapahan-kevitra 26/24.
^ feh. 3 Mandinika ny raharaha mifandray amin’ny fiaraha-monina sy ny fanasoavam-bahoaka ny Komity Fahatelo, ary mijery an’ireo olana eran-tany mifandray amin’ny zon’olombelona.
^ feh. 8 Tatitra nataon’ny Vaomiera Manadihady Momba ny Zon’olombelona any Érythrée (Tatitra Navoaka Mialoha), manazava amin’ny an-tsipiriany ny vokatry ny fanadihadiana nataony. Tatitra A/HRC/29/CRP.1, feh. 1530(c) sy 1531(c).
^ feh. 10 Fanapahan-kevitra A/HRC/29/L.23.